Fampifanarahana 'The Final Girl Support Group' amin'ny asa miaraka amin'i Charlize Theron, ny Muschiettis
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Fampifanarahana 'The Final Girl Support Group' amin'ny asa miaraka amin'i Charlize Theron, ny Muschiettis
by Waylon Jordan Jolay 19, 2021
by Waylon Jordan Jolay 19, 2021 1,146 hevitra
Ny tantaran'i Grady Hendrix Ny vondrona mpanohana tovovavy farany napetraka amin'ny fampandrosoana ho andian-tantara ao amin'ny HBO Max. Ny fampifanarahana dia fiaraha-miombon'antoka eo amin'ny Charlotte Theron's Denver & Delilah Films miaraka amin'i Andy sy Barbara Muschietti's Double Dream sy Aperture Ventures.
Toy izao ny famintinana ofisialin'ny boky:
Lynnette Tarkington dia tovovavy tena izy izay tafavoaka tamin'ny famonoana olona iray. Nandritra ny folo taona mahery, nihaona tamin'ny tovovavy farany dimy hafa sy ny mpitsabo azy ireo izy ao amin'ny vondrona mpanohana ho an'ireo tafavoaka tamin'ny tsy eritreretina, miasa mba hamerenana ny fiainany. Avy eo ny vehivavy iray dia tsy mahita fivoriana, ary tonga ny fahatahorany indrindra - misy olona mahalala ny momba ilay vondrona ary tapa-kevitra ny handrava ny fiainany indray izy ireo.
Saingy ny zavatra momba ny zazavavy farany dia na ratsy toy inona na inona ny fifandanjana, maizina ny alina, maranitra ny antsy, tsy ho kivy mihitsy izy ireo.
Vao tsy ela akory izay no nidona tamin'ny talantalana ilay boky, fa efa niteraka savorovoro ho an'ireo mpankafy tantara foronina mahatsiravina. Ity no fanitsiana farany an'ny iray amin'ireo tantaran'i Hendrix. ny Ny bokin'ny boky boky atsimo momba ny vampira mpamaky boky vao tsy ela akory izay no nalain'ny studio Amazon ho an'ny, sy ny tantarany, Ny fandroahana ny sakaizako akaiky indrindra ho avy tsy ho ela avy ao amin'io studio io ihany koa.
Theron dia ho mpanatanteraka mpanatanteraka ny tetikasa miaraka amin'ny Muschiettis. Andy Muschietti dia vonona ihany koa hitarika ny fizarana pilot.
iHorror dia hitazona anao hatrany amin'ny vaovao farany momba ny fampifanarahana rehefa misy izany.
Efa namaky ve ianao Ny vondrona mpanohana tovovavy farany? Mpankafy ny bokin'i Hendrix ve ianao? Ampahafantaro anay ny hevitrao amin'ny hevitra etsy ambany!